ओलीले चाले चलाखीपूर्ण कदम, समय नहुँदै संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदै::अर्थपूर्ण : अर्थ र सम्पूर्ण समाचार
काठमाडौं । सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साँझ ५ बजेबाट अधिवेशन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । पार्टीमा राजीनामा दिन दवाव आएपछि प्रधानमन्त्री ओेलीले विभिन्न रणनीति बुनिरहेको विश्लेषण भैरहेकै बेला सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि रिसारिस गरेको हो । संसद बैंठक नै नबसेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि राजीनामा दिन र उनीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि बाटो बन्द हुने छ ।
संसद नै नभएपछि ओलीले कहां राजीनामा दिने ? कहां उनीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गने ? प्रश्न जटिल बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सरकारको रिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आव्हान गर्ने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न रिफारिश गरिनुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चलाखीको रुपमा हेरिएको छ । किनकी अझै अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय नभइसकेको बताईको छ ।
प्रचण्डको सुरक्षा गर्ने ६ सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित
आजदेखि जोर विजोर प्रणाली लागू
आज नेप्से १ दशमलव २९ अंकले घट्यो
२४ घन्टामा ६ हजार ६२२ नमुनाको पिसिआर परिक्षण
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने २२ दशमलव ५ प्रतिशत मानिसहरुले रोजगारी गुमाए
उपत्यकामा बिहीबार थपिए ८७ जना कोराना संक्रमित
उपत्यकामा ८ जना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कबाहिर
पाटन अस्पतालमा उपचारत संक्रमित महिलाको मृत्यु